Madaxweynaha Soomaaliya oo ku soo wajahan gobolka Minnesota
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku soo wajahan gobolka Minnesota	Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 13:04	Wednesday, 16 January 2013 12:59	Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya mudane Hassan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo wajahan gobolka ay Soomaalida ku badan tahay ee Minnesota.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay hadda ku sugan yihiin magaalada Washington DC, halkaas oo uu kulamo kala duwan kula leeyahay madaxda sar sare ee dowlada Mareykanka.
Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah Wasiirka Arimaha Dibada Fowsiya Xaaji Adan, Wasiirka Warfaafinta Col. Cabdullahi Ciilmooge, madaxa xafiiska madaxweynaha Kamal Gutaale iyo la-taliyeyaasha madaxweynaha.
Madaxweynaha wuxuu imanayaa magaalada Minneapolis maalinta Jimcaha Jan 18. Wuxuu isla maalintaas Soomaalida Minnesota kula kulmi doonaa Minneapolis Convention Center-ka. Madaxweynaha wuxuu magaalada Minneapolis ka anbabixi doonaa maalinta Sabtida. Inta uusan laaban wuxuu si isdaba joog ah ula kulmi doonaa jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota.